Taariikhda My Butros » 5 Sababaha Maxaad Butros Milkiilayaasha Ma Winners Adduunka Dating
Waxaa jira sababo badan milkiilayaasha xayawaanka waa il muhu wanaagsan sida adduunka shukaansi ah. Dhammaan milkiilaha xayawaanka ah ka dib bandhigayaa dhan qualites muhiim ah taas oo dadka dunida ku shukaansi ugu raadiyo uun by lahaanshaha xayawaan rabaayad ah. Waxa uu muujinayaa nooca qofka aad tahay iyo kor u fursada helo jacaylka aad noloshaada! Halkan waa kaliya shan ka mid ah tayada badan oo milkiilayaasha xayawaanka muujiyaan in ay dunida ka baxsan:
Si aad leedahay xawayaan mid uu leeyahay nooca u noqon. Siinta waqtiga aad, Caashaq iyo jaceyl ay u xawayaan muujinaysa in aad qabto roonaantaada iyo naxariis ah oo adiga kugu saabsan. Waxay kaloo muujinaysaa in aadan u malayn in kaliya naftaada. Waxaad u malayn kartaa in dadka kale aad. Ka dib dhan aad ka fekereyso inaad maalin nololeed iyo neefsashada oo laga abuuray gudaha iyo dibedda maalinta.
Xayawaanka yeelan karaan daqiiqado ay xeel iyo mid uu leeyahay tahay in badan oo ka mid ah u dulqaadan doonin gaar ahaan wata eeyo badan. Ma aha in dhamaan laakiin badan. Xayawaanka baadho samir mararka qaarkood sida la jeclaysto sida ay yihiin iyo xaqiiqda ah in aad wax ka qaban karno muujinaysaa in samir aha Samo falku a aad hantiyi.
La milkiilaha xayawaanka ah macnaheedu waa in aad u baahan tahay inaad mas'uul ka noqon. Caafimaadka iyo fayo-qabka of this xoolaha la jeclaysto waa in aad gacmaha iyo aad u baahan tahay inaad naftaada caddayn in mas'uuliyadda iyo in la hubiyo in xayawaanka tani waa in ay caadi yihiin. Tani waxay hoosta muujinayaa dareen ah ay awood u qaataan mas'uuliyadda iyo si loo hubiyo in wax walba waa in ay caadi yihiin.
Si aad leedahay xawayaan aad leedahay si ay leeyihiin xaddi gaar ah oo go'an. Waad og tihiin in aad qaadato on tallaabo weyn ku leedahay noloshaada taasoo weeyaan badan oo masuuliyad si aad u leedahay in aad ahaato qof oo la go'aamiyo inay arkaan marayo iyo in qaadashada loolan cusub la dardaaran inay ku guulaystaan.
Wax ugu weyn ee ahaa milkiilaha xayawaanka la muujinayo ay tahay in aad leedahay awood ay u muujiyaan jacaylka. Waxa ay muujinaysaa in aadan qabow iyo dad aanan sababtoo ah waxaad tahay Mujin kalgacal xayawaankaaga. Tan waxay cadeyneysaa in aad tahay qof jecel oo uu noqon karaa mid jilicsan, tur, daryeelaya oo jecel in qof nasiib ku lahaa inaan aad u hesho.